TechadminLab - Blog Technology
Adobe Shockwave in laga joojiyo Windows
Haddii aad ku koray internetka, waxaan hubaa inaad ka war qabto Adobe Shockwave. Faa'iidada aan ku wada xirannay qaar ka mid ah in la ciyaaro codsiyada multimedia iyo ciyaaraha fiidiyaha. Waxaa sii daayay Macromedia ee 1995, ka dib markii uu Adobe ka helay 2005, barnaamijka ...
Ku rakib barnaamijyada laga bilaabo dukaanka dhammaan Windows 10 Devices isku mar
Ku rakibida app ka Store Store ee Windows 10 waa mid fudud. Waxaad kaliya u baahan tahay inaad furto bogga app ee App Store ka dibna riix badhanka Get ee si aad u soo dejiso iyo rakibi app in aad PC. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad leedahay kombiyuutaro kala duwan ...
Firefox Send: Share Files ilaa 2.5GB
Ma jiro wax qaali ah oo ku saabsan adeegyada wadaagista faylasha oo bilaash ah. Xaqiiqdii, waxaa jira boqolaal ka mid ah kaydinta daruuriga iyo adeegga wadaagista waraaqaha. OneDrive, Google Drive, Dropbox, iyo iCloud Drive waa faylasha caanka ah ee caanka ah iyo wadaagista adeegyada halkaas. Firefox u dir Firfoxifka dir ...
Sidee loo abuuraa Lenovo USB Recovery Drive for Windows 10
Waxaa jira qalab dhisme oo ku yaala Windows 10 si loo abuuro xawaareynta USB. Dhamaan dadka isticmaala, oo ay ku jiraan isticmaalayaasha Lenovo PC, waxay isticmaali karaan qalabka la dhisay si loo diyaariyo xawilaadda Windows 10 USB. Dhibaatada ka jirta adeegga soo-kabashada ee la dhisay ayaa ah inaanu abuuri karin ...
Intee in le'eg ayaad isticmaali kartaa Microsoft Office la'aanteed?
Miyaad daabacday nuqul aan shati lahayn oo ka mid ah Microsoft Office 2019 ama Xafiiska 365 ee kombiyuutarka oo aad rabto in aad ogaato intaad isticmaali karto sheyga Microsoft Office adigoon firfircoonayn? Tilmaan-bixiyahan, waxaan ka wada hadli doonaa inta uu qofku isticmaali karo Xafiiska Microsoft ...
Google March 2019 Xilliga Cusub: Cawaaqibka iyo Talaabooyinka la Qaadayo
Google ayaa soo saartay cusbooneysi algorithm oo ku saabsan 12th ee Maarso sanadkan. Iyadoo ay la socdaan waxyaabo badan oo ku saabsan miisaanka saamaynta ay ku leedahay, iyo waxa nuucyada iyo goobaha ay tahay in ay saameyn ku yeeshaan. Laakiin ka hor inta aynaan qoto dheereynin ...
Mozilla Firefox 66.0 oo la sii daayay Sound Auto Play
Mozilla Firefox 66.0 ayaa la sii daayay laba maalmood ka hor. Hadda waxaa laga heli karaa kaydka ugu weyn ee Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10. Firefox 66.0 sii daayo sharraxaadyada: Ka horjoogso dhawaaqa dhawaaqa. Waxaad ku dari kartaa ka-reebis, ama soo jiid jimicsiga. Si sahlan loo baadho iyada oo la cusbooneysiiyey tabo cusub oo khaas ah ...
Avidemux 2.7.3 oo la sii daayay Decoder Fixes kala duwan (Ubuntu PPA)
Agaasimaha fiidiyowga ee Avidemux ayaa sii daayay kiis cusub oo xaddidan oo cusub 11 ka dib markii la soo dhaafay, iyadoo la hagaajiyay hagaajinta iyo hagaajinta kobcinta yaryar Avidemux 2.7.3 faahfaahin dheeraad ah soo saartay: Vapoursynth hadda waa mid si tartiib ah loo soo dajiyay si looga fogaado khaladaadka ASF / WMV demuxer si loo xaliyo dib u habeynta PNG decoder Kaydka aasaasiga ah ee hadda ...
Ku rakib Cave Sheeko si fudud adoo isticmaalaya Ubuntu 18.04, 16.04
NXEngine Evo, oo dib loo qoro ciyaaraha kubbadda cagta ee kubadda cagta ee Cave Story, hadda waa sahlan tahay in lagu dhejiyo Ubuntu Linux iyadoo la isticmaalayo xirmo xiran. NXEngine Evo waa fiilo fara badan oo furan oo dib-u-qori ah oo lagu magacaabo Doukutsu Monogatari oo sidoo kale loo yaqaan 'Cave Story' oo uu abuuray Studio Pixel. ...
KeePassXC 2.4 La sii daayo heerarka sare ee DPI ee 4K Screens
Ka dib laba beta oo la sii deynayo, maamulaha kootada ee KeePassXC 2.4.0 ugu dambeyntii wuu degan yahay. Waa kuwan sida loo rakibo Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, iyo ka sareeya. KeePassXC 2.4.0 waxay awood u leedahay isku-dubaridka nidaamka iskudhafan ee bandhigyada DPI-sare, ku daro Saaxiibka xogta cusub, wuxuu adeegsanayaa baaritaan sare, iyo jadwalka saxda ah ee KeeShare database database synchronization ...
Kid3 Tag Editor Editor 3.7.1 sii daayay, Sida loo rakibo Ubuntu
Tifaftiraha qoraalka ee Kid3 ayaa sii daayay 3.7.1 maanta. Waa kuwan sida loo rakibo Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10, iyo ka sareeya. Kid3 3.7.1 waxay asal ahaan keenaysaa hagaajinta ciladaha iyo hagaajinta isticmaalka. Inta badan sifooyinka cusub waxay bartilmaameedsanayaan version Android, taas oo hadda taageertay mugdi madow, oo ka wanaagsan ...
[Falanqaha Quick] Move Clock To The Right Guddi Top ee Ubuntu 18.04
Tababarkan dhaqsaha ah ayaa socda si uu u muujiyo sida loo dhaqaajiyo saacadda dhexe ilaa midigta guddiga sare ee Ubuntu 18.04 Gnome Shell. Taariikhda iyo wakhtigu waa muuqaal ahaan muuqaal ah oo lagu soo bandhigay bartamaha sare ee Gnome 3 desktop. Waa adag tahay ...
Xakamaynta 3-fiirin-muuqaal - Dhowr dheer oo la sugi karo ayaa ka soo baxa
Astem in ay ku hesho dhacdooyinka xilliga qaboobaha ah ee loo yaqaan 'Cataclysms'; Xakamaynta PC iyo UI La-bilaabay Cusbooneysiisyo
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 Dib u eegida kaarka sawirada FT. MSI Armor X ...
AMD Radeon VII 7nm GPU wuxuu udub dhexaad u yahay dib u-baadhayaasha Tijaabada
Windows cusub 10 19H1 Dhismo Desktop Apps ee Windows Mixed Reality
Anthem Runsasho ku saabsan PS4 Pro ka badan Xbox One X, 4K Checkerboarding loo isticmaalo ...
Windows 10 Updates Mar kale Dib u Jooji qaar ka mid ah dadka isticmaala - Beddel galka Google ee DNS si ay u ...
Asus wuxuu soo saaraa Android Pie si loogu darbardhigo Zenfone 5Z: Waa kuwan sida loo rakibo
FaceTime feylka ayaa u ogolaanaya dadka isticmaala iPhone in ay ka hadlaan wadahadalka; Apple weli talaabo qaadin
Cusboonaysiinta PUBG #25 hadda waxay ku nool yihiin barista imtixaanka: Bizon SMG, Canted Sight, Vikendi ...
WhatsApp ee shabakadda waxay ku helaysaa ikhtiyaarka sawirka-muuqaal leh: Halkan waa sida loo bilaabi lahaa
Samsung Galaxy M10, qiimaha M20, faahfaahinta kala duwanaanshaha kaydka ayaa ka daadatay ka hor intaan la bilaabin
Mulkiilaha OnePlus 6T oo ka cabanaya wax aan caadi ahayn oo biyo qabatinka ah: Ma jiraa xal in la xaliyo ...
WhatsApp, Instagram, Isdhaafsiga Rasmiga Facebook: Maxaa macneheedu u yahay isticmaalaha?
Muuqaalka maskaxda ee PUBG Mobile waa cabsi, caqabado iyo dhacdo ugu wanaagsan oo dhaco: Dib-u-eegid